पुस्तक समीक्षा, गाईडहरू, परावर्तन र विचारहरू - Ikkaro
यहाँ हामी पुस्तकहरु को बारे मा कुरा। म तिनीहरूको समीक्षा गर्दछु, उनीहरूमा टिप्पणी गर्दछु, एनोटेशनहरू सुरक्षित गर्दछु, र मैले हाइलाइट गर्ने शीर्षकहरू। नोटहरू जुन म चीजहरूको बारेमा बनाउँदछु जुन मैले खोजी गर्न चाहान्छु वा अधिक जान्नको लागि र बाँकी वेबमा लिंक गर्छु।
म नयाँ विचारहरू र चासोको विषयहरू हाइलाइट गर्दछु। तिनीहरू प्राविधिक पुस्तकहरू र निबन्ध, कथा, कविता पनि हुन्।
२ परियोजनाको चरणहरू
यो नयाँ सेक्सनमा म एक निजी परियोजना एकीकृत गर्छु जुन मसँग पुस्तकहरू, साहित्य र प्रतिबिम्बहरूमा थियो। यसलाई आइल अफ गोन्ट भनिन्थ्यो र म यसलाई यहाँ जारी राख्छु। पुरानो परियोजनामा ​​मैले आफूलाई धेरै साहित्यिक विषयहरूमा सीमित गरें।
अब दृष्टिकोण अलि फरक हुन गइरहेको छ र म सबै पक्षहरूलाई हाइलाइट गर्न जाँदैछु जुन मैले चाखलाग्दो ठान्दछु र यदि म गर्न सक्दछु भने ती सबै विषयहरू लि link्क हुन्छ जुन हामीले छलफल गरिरहेका छौं। यो केवल एक साहित्यिक प्रश्न हुन गइरहेको छैन।
Iacobus माटिल्डे Asensi द्वारा
म यस बिन्दुमा खोज्ने छैन मातेल्डी एसेन्सी न त उनका उपन्यासहरू। Iacobus तेस्रो वा चौथो हो जुन मैले पढेको थिएँ, मलाई राम्रोसँग सम्झना छैन, र यो जहिले पनि यो एकदम उत्कृष्ट सेट गरिएको उपन्यास हो। चुस्त, छिटो र चाखलाग्दो।
Iacobus आदर्श छ जब तपाईं एक प्रकाश, ऐतिहासिक र साहसिक पठन चाहनुहुन्छ। तपाईं यसलाई मनपर्नुहुनेछ यदि तपाईंलाई मन्दिरहरू र मन्दिरको अर्डरसँग सम्बन्धित चीजहरू मनपर्दछन्।
ज्याक लन्डन द्वारा एक अलाव जलाउनुहोस्
मैले प्रायद्वीपको माध्यमबाट फिलिमोनाको बाटोको फाइदा लिएको छु र तापमानमा ठूलो ड्रपहरू पुनः पढ्नका लागि बोनफायर बत्ती ज्याक लन्डन द्वारा.
जस्तै इथाका कविता यो संस्करणमा बेर्ने सानो कथा हो
यस पटक मैले खरीद गरेको संस्करण Cordelia किंगडम त्यो संग आउँछ राल अरियास द्वारा चित्रण र सुसाना क्यारल द्वारा अनुवाद। यस संस्करणमा ज्याकि लन्डनले लेखेको बोनफायरको दुई कथाहरू पनि समावेश छन्। १ 1907 ०। जुन एक हो जुन सबैलाई थाहा छ र जसमा पुस्तकमा दृष्टान्तहरू आधारित छन् र १ 1902 ०२ ई जुन एनेक्सको रूपमा समावेश गरिएको छ र जुन उनले पहिलो साहित्यिक पत्रिकाका लागि लेखेका थिए। युवा साथी
तपाईं सक्नुहुन्छ अब यसलाई € buy मा किन्नुहोस्
Cavafis को Ithaca
म्यागीले मलाई एउटा पुस्तकको संस्करण ल्याए जुन म वास्तवमै चाहन्छु। Cavafis को Ithaca, संस्करण नॉर्डिक पुस्तकहरुसंग भिसेन्टे फर्नांडीज गोन्जालेज द्वारा अनुवाद र फेडरिको डेलिकाडो द्वारा चित्रण.
यो वर्षको मेरो पहिलो पढाइ थियो। एउटा सानो रत्नको रूपमा संस्करणको लागि र यसको चित्रणहरूको मजा लिदै पढ्न र यसलाई पुनः पढ्नको लागि सक्षम हुन।
प्रेममा गिर्नुहोस् बुकटेलरमा हेर्नुहोस्
माहामारी। COVID-19 ले संसारलाई हल्लायो
माहामारी। COVID-19 ले स्लाभोज जिजेकको संसारलाई हल्लायो
मैले यो नि: शुल्क खरीद गरेको र पढें जब यो मेमा प्रकाशित भयो, लगभग महामारीको सुरूमा। म वास्तवमै Zizek पढ्न चाहान्छु तर मलाई लाग्छ कि मैले उहाँसँग नजिक हुन गलत पुस्तक पाएँ। कमसेकम मलाई आशा छ कि यो पुस्तक थियो र लेखक होइन।
मेरो अन्तर्ज्ञान मलाई बतायो कि COVID-19 र यसको सुरूमा महामारीको बारेमा एउटा पुस्तक पढ्नु राम्रो विचार थिएन। उहाँसँग नगद उठाउने व्यक्तिको सबै ईयरमार्कहरू थिए। तर अर्को तर्फ मलाई लाग्यो कि एक प्रख्यात दार्शनिक हो म गुणवत्ता को केहि प्राप्त गर्न चाहन्छु। म अझै पनि सोच्छु कि यो महामारीको शुरुआती दिनमा पनि राम्रो परीक्षण सिर्जना गर्न सम्भव थियो। जे भयो त्योमा आधारित नभए पनि हो, फरक परिदृश्यहरू, विगतका विपत्तिहरू इत्यादि विश्लेषण गरेर।
वास्तविकता यो हो कि पुस्तक ठूलो निराश भएको छ म कसैलाई सिफारिस गर्दिन। लगभग एक मजाक।
आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे द्वारा स्पेनको इतिहास
मैले पुस्तकालयबाट यो पुस्तक लिएँ (तपाईं यसलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ अमेजन)। मैले पढ्न शुरू गरें र केहि अनौंठो याद गरें। योसँग एउटा अनौंठो शैली, धेरै छोटो अध्यायहरू, धेरै अनौपचारिक भाषा, र धेरै संख्यामा अप्ठ्यारो थियो। तिनीहरू पुस्तकको सट्टा लेखहरू जस्तो देखिन्थ्यो। मैले पनि यस्तै आशा गरेको थिएँ स्पेनको न्यूनतम इतिहास जुआन पाब्लो फुसी द्वारा, तर म गलत थियो।
र वास्तवमा, केवल पछाडिको कभर पढ्नु (केही गर्न जुन मलाई गर्न मनपर्दैन) शंकाको पुष्टि भयो। स्पेनको इतिहास, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टेले पुरानो एक्सएल सेमानलको मार्क डे मार्कको स्तम्भमा years बर्ष भन्दा बढी समय प्रकाशित गरेको लेखको संकलन हो।.
यदि तपाईंले कहिले हप्ताको स्तम्भ पढ्नु भएको छैन भने, मेरो मतलब यो होः
नकारात्मक पक्ष त्यो हो कि पूर्व ग्रीसको उपनिवेश, सागुन्टो पनि रोमीहरूको सहयोगी थियो: केही टर्कीहरू जुन त्यस समयमा - तेस्रो शताब्दी ईसापूर्वले यसको लेखा लिन्छ - भूमध्यसागरमा ककरेलहरू बनाउन थालेका थिए। अवश्य। एउटा उल्लेखनीय चरा लडाईएको थियो, युद्धको साथ र त्यस्तै।
कार्ल Honoré को ढिलो प्रशंसा
मलाई यो किताब मनपर्दैन र म यो सिफारिस गर्दिन। म बलियो सुरु गर्छु। धेरै खराब यो वर्षको मेरो पहिलो पढाइ थियो। र यो मलाई पढ्ने बर्ष पढ्न शुरू नगरेकोमा हुन्छ बेकारको उपयोगिता, २ वर्षको परम्परा जुन मैले हराउन दिन्न।
होनोरको पुस्तकका लागि, मलाई लाग्छ योसँग आधा पृष्ठहरू अझै बाँकी छ। म यो समीक्षा लेख्ने कि नगर्ने भनेर बहस गर्दै छु, तर जहाँ सँधै सकारात्मक कुराहरु हुन्छन, भविष्यमा मैले लेखेको विषयमा लेख्नु पर्छ म मेरो ध्यान खिच्ने विषयको समीक्षा गर्न चाहान्छु। यो ब्लग मेरो स्मृति बन्न सक्छ.
Ignacio रामोनेट द्वारा सञ्चारको निरंकुशता
धेरै पहिले मैले पढें हामी कसरी बाइक बेच्दछौं त्यो किताब Ignacio Ramonet Noam Chomsky सँगै लेख्नुभयो र त्यसबेलादेखि म मोहित भएँ। चम्स्कीबाट मैले उनका धेरै कामहरू पढ्ने क्रम जारी राखेको छु तर रामोनेटबाट मैले अहिलेसम्म यस्तो गरिन। र यो सीधा हाम्रो सेक्सनमा जान्छ libros.
संचारको निरंकुशता हाम्रो समाजमा मास मेडियाको कामको निबन्ध हो। टेलिभिजनको भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्दै।
Penelope Fizgerald's bookstore
बुकस्टोर एक महान् पेनेलोप फिटजेराल्ड उपन्यास हो। इम्पेडिमेन्टा (यो सँधै) को महान संस्करणको एना बुस्टेलो र टेरेन्स डुले द्वारा पोस्टफेस द्वारा अनुवाद गरिएको छ। म तिमीलाई छोड्छु सम्पादन गर्न लिंक.
किताबको पसलमा, पेनेलोप फिट्जगराल्डले फ्लोरेन्स ग्रीनको विधवाको कथा बताउँछिन्, उनी एक सानो विधवा हर्डबरो भन्ने ठाउँमा बजार पसल स्थापना गर्न चाहन्थे, जहाँ उनी 8 बर्ष देखि बसिरहेकी छिन्। यो १ 1959 XNUMX in मा सेट गरिएको छ, जस्तो कि हामीले बेलायतको सानो माछा मार्ने गाउँमा भनें।
सन् १ 1998 XNUMX in मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमरत्या सेनको बारेमा कुरा गरिएको छ प्रजातन्त्रको महत्त्व, यसको मूल्य र पश्चिमीकरण र भूमण्डलीकरणको बारेमा सम्बन्धित विभिन्न झूटा मिथकको बारेमा बताउँछ।
पब्लिशिंग हाउस एल भिइजो टोपो द्वारा सम्पादित र जाभियर लोमेले पोन्सेको अनुवाद सहितको निबन्धले हामीलाई प्रजातन्त्रको नतिजा र यसको अर्थ देशले यो प्रणालीको स्थापना गर्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा झल्काउँछ।
पुस्तकलाई तीन भागमा बाँडिएको छ:
प्रजातन्त्र र यसको विश्व जरा।
लोकतन्त्र एक विश्वव्यापी मानको रूपमा।